Wayne Rooney ayaa sheegay in ciyaartoyda Manchester United ay u baahan yihiin inay ‘istaagaan’ Jose Mourinho | Weheliye Online
Wayne Rooney ayaa sheegay in ciyaartoyda Manchester United ay u baahan yihiin inay ‘istaagaan’ Jose Mourinho
United ayaa ku jirta kaalinta 8aad ee horyaalka Premier League iyadoo 3-2 ay kaga badisay Newcastle sabtidii, laakiin todobo dhibcood ayay ka hooseysaa kooxda hogaanka heysa ee Manchester City.
Kooxda ayaa lagu qasbay inay beeniso warar sheegaya in Mourinho uu qarka u saaran yahay inuu ku sii negaado Old Trafford, waxaana uu aaminsan yahay in xiddiga reer Portuqiis loo sameeyay qaab ciyaareedka ciyaartoyda da ‘yar.
Mourinho ayaa wajahay caqabado ka dib markii kooxda ay ku bilowday xilli ciyaareedka tartiib tartiib ah
Rooney ayaa u sheegay The Telegraph, ka dib markii uu dhaliyay labadii gool ee uu ka dhaliyay United United kulankii ay 2-1 kaga badiyeen Chicago Fire axadii.
“Ciyaartoyda, tababaraha, waxay aheyd bilow bilow ah xilli ciyaareedkan.
“Waan ogahay in Jose uu ku soo laabanayo kubad, laakiin waxaan dhahay todobaadyo ka hor, ciyaartoyda waa inay istaagaan.
“Waa inay noqdaan kuwo la tiriyo waana inay noqdaan kuwo ka wanaagsan.” Tababaraha wuxuu sameyn karaa wax badan, lakiin waxa uu hoos u dhacayaa ciyaartoyda garoonka si ay u soo saaraan, islamarkaana ay si wadajir ah u wada shaqeeyaan.
Moyes: Jose wuxuu u baahan yahay waqti badan
David Moyes ayaa aaminsan in cadaadiska uu haatan ka yar yahay Jose Mourinho marka uu joogo Manchester United.
David Moyes ayaa sheegay in Mourinho uu u qalmo inuu waqti dheer ku qaato Old Trafford
“Waa wax yar oo isdaba joog ah, laakiin waa bartilmaameed wanaagsan.” Qaar ka mid ah ciyaartoyda waa inay noqdaan kuwo ka fiican. ”
Rooney ayaa aaminsan in xaaladda haatan ee Old Trafford ay la mid tahay Louis van Gaal labo sano oo uu la joogay kooxda.
“Waxaan dhahay wax la mid ah markii Louis van Gaal uu halkaas joogay” ayuu yiri Rooney. “Wax badan ayaan soo qabtay, laakiin albaabada la xiray waxaan ku yiri ciyaartoyda, waa inaan si fiican u shaqeynaa”.
“Shakhsi ahaan waxaan qabaa inuu [Van Gaal] naga dhigay si aad u fiican, lakiin ma aanan soo saarin garoonka, si aan u hubiyo inaan ku dhahayo inaan arko qaab ciyaareedka.”
Previous articleCiidamad kumaandooska Somalia oo fuliyay howlgal qarsoon oo lagu dilay shiikh caan ka ahaay Dagmadda wanlaweyn Ee G.Sh.Hoose
Next articleMadaxwaynaha Donald Trump ayaa raaligelin ka siiyay Maxkamadda Sare ee Garsoorka Brett Kavanaugh “xanuunka iyo dhibaatada ba’an” iyo qoyskiisa “waxaa lagu qasbay inuu ku adkaysto”